Afrika, 01 July 2018
Ethiopia oo ONLF ka Saareysa Liiska Argagixisada
Golaha wasiiradda dowladda Ethiopia ayaa baarlamaanka dalkaasi u gudbiyay qaraar ururka ONLF iyo ururo kale looga saaryo liiska kooxaha argagixisada.
ONLF oo ka hadashay sii daynta Qalbi-Dhagax
Ururka ONLF ayaa ka hadlay sii daynta Cabdikariim Muuse Qalbi-Dhagax, oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa, kaasoo kadib muddo uu dowlada Ethiopia gacanta ugu jirey la sii daayey shalay.
Cabdikariin Qalbi-Dhagax oo lasii daayey
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay bishii August ee sannadkii hore dawladda Soomaaliya u gacan gelisay dawladda Itoobiya ayaa maanta laga sii daayey xabsi ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Maxay yihiin kooxaha qalalaasaha ka wada Mozambique?
Waxaa dhowaanahan sii kordhayayey qalalaasaha ka dhacay gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique.
Nigeria: 200 qof oo ku dhintay dagaal dhuleed
Barasaabka gobolka ku yaalla bartamaha dalka Nigeria ee Plateau ayaa shaaciyey tirada rasmiga ah ee dadkii dabyaqaada toddobaadkii tagey ku dhintay iskudhacyo dhex maray xoolaley muslimiin ah iyo beeraley kirishtan ah.
Wafti ka socda Eritrea oo tagey Ethiopia
Wafti heer sare oo ka socda Eritrea ayaa ku sugan dalka ay deriska yihiin ee Ethiopia, halkaasi oo ay ku geli doonaan wada-hadallo taariikhi ah, oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaalladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika.
Warkii ugu Dambeeyay ee Qarixii Zimbabwe
Wiil Soomaali ah oo ka mid noqdey koox ku guulesatay tartanka sameynta Robot-yada
Abiy Ahmed oo Qarax ka Badbaaday
Muxuu ahaa hadalkii Abiy ee Addis-Ababa?